हुवावे मेट and० र मेट 20० प्रो: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात Androidsis
Huawei Mate 20 र Mate 20 Pro: हुआवेईको नयाँ उच्च-अन्त
हामीले पर्खिरहेको दिन आइसकेको छ। नयाँ हुआवे मेट २० र मेट २० प्रो आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भैसकेका छन्। चिनियाँ ब्रान्ड २०१ 2018 मा बजारको मुख्य खेलाडी मध्ये एक बन्न पुगेको छ। यसको बिक्री उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ, र हामी यसको फोनमा गुणस्तरमा ठूलो छलांग देख्न सक्षम भएका छौं। फोनको यस नयाँ दायरामा फेरि स्पष्ट छ कि केहि।
यी Huawei Mate 20 र Mate 20 Pro को साथ, चिनियाँ ब्रान्डले P20 दायरासँग यति राम्रोसँग कार्य गरेको सुधार गर्न चाहन्छयस वर्षको मार्चमा प्रस्तुत गरियो। दुईवटा क्वालिटी फोनहरू हाम्रो प्रतिक्षा गर्दै छन्, एकदम वर्तमान डिजाइनका साथ। हामी यी फोनहरूबाट के आशा गर्न सक्छौं?
दुबै मोडेलहरू हुवावेले लन्डनमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ। त्यसोभए हामीलाई पहिले नै यसको पूर्ण विवरणहरू थाहा छ। हामी अब प्रत्येक दुई मोडेलको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दैछौं। त्यसोभए हुवावेको नयाँ उच्च-अन्त्य दायराबाट तपाई यी फोनका बारे अझ बढी जान्न सक्नुहुन्छ।
1 Huawei मेट 20
2 हुआवेई मेट 20 प्रो
Huawei मेट 20
हामी फोनबाट शुरू गर्दछौं जसले यो नयाँ उच्च-अन्त निर्मातालाई यसको नाम दिन्छ। यी महिनाहरूमा त्यहाँ केही लीक भएको छ, धन्यवाद जुन हामी यसको बारेमा केही जान्न सक्षम भएका छौं। तर आज सम्म यो उच्च-अन्तमा सबै डेटा हामीसँग थिएन। यी हुवावे मेट २० का पूर्ण विवरणहरू हुन्:
प्राविधिक विशिष्टता हुवावे मेट 20०
मोडेल 20 मेट
अपरेटिङ सिस्टम EMUI 9.0 संग Android 9.0 पाई
स्क्रिन .6.53..18.7 इंच FHD + १ 9..XNUMX: HD HDR अनुपातको साथ
प्रोसेसर हुआवेई किरण 980
आन्तरिक भण्डारण १२128 जीबी (एनएमकार्डको साथ विस्तार योग्य)
रियर क्यामेरा १ + + १२ + MP सांसद एपर्चरको साथ एफ / २.२ / १..16 र एफ / २.12
अगाडिको क्यामरा एपर्चरf/ 24 संग 2.0 MP
कनेक्टिविटी GPS ब्लुटुथ .5.0.० USB प्रकार सी वाइफाइ एसी mm.mm मिमी जैक
अन्य सुविधाहरू IP53 NFC रियर फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हाइभिसन अनुहार पहिचान
ब्याट्री सुपर फास्ट र वायरलेस चार्जिंगको साथ ,4.000००० एमएएच
आयामहरू १157. x x .75 7.9.१ x .193..XNUMX मिमी र तौल २० XNUMX ग्राम
मूल्य 799 यूरो
यो Huawei मेट 20 उपकरण निर्माताले प्रस्तुत गरेको दुई उपकरणहरूको सबैभन्दा ठूलो स्क्रीनमा। यसमा .6,53..XNUMX इन्च स्क्रीन हुनेछ। हामी यसमा निशान भेट्छौं, यद्यपि यस अवस्थामा यो पानीको थोपा पानीको रूपमा छ। यो सानो र अधिक विवेकपूर्ण छ, त्यसैले यसले स्क्रीन यत्तिको हावी हुने छैन। पक्कै पनि धेरैलाई अन्तको सीमाको यो डिजाइनले अधिक विश्वस्त गर्दछ। यद्यपि यसले स्पष्ट पार्दछ कि निशानहरू बजारमा रहन आएका छन्।
यो नयाँ पुस्तामा, चिनियाँ ब्रान्डले दुबै मोडेलहरूमा ट्रिपल रियर क्यामेरा प्रस्तुत गर्दछ। साथै यो Huawei मेट 20 ट्रिपल क्यामेरा संग आउँछ। यो एफ / १.12 अपर्चरको साथ १२-मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर,f/ २.1.8 र १mm एमएम एपर्चरको साथ अर्को १ixel-मेगापिक्सल वाइड-एंगल सेन्सर, र टेलिफोटोको लागि अन्तिम--मेगापिक्सल सेन्सरले बनेको लेन्सको संयोजन हो। तिनीहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित हुनेछन्, जसले हामीलाई हरबखत थप फोटोग्राफी मोडहरू राख्न अनुमति दिनेछ। ती मध्ये हामीसँग बोकेह वा पोर्ट्रेट मोड जस्ता प्रभावहरू हुन्छन्।
ब्याट्री यसको एक शक्ति हो। यो पहिलेको पुस्ता भन्दा ठूलो छ, यस अवस्थामा 4.000 mAh क्षमताको साथ, र द्रुत र वायरलेस चार्जिंग जस्ता सुविधाहरूसँग जुन निस्सन्देह उपभोक्ताहरूलाई विश्वस्त पार्दछ। यद्यपि सुपर फास्ट चार्जिंग प्रणाली अन्य मोडेलमा विशेष छ। एक अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा, यो एन्ड्रोइड .9.0.० पाई नेटिभ र ईएमयूआई को सब भन्दा पछिल्लो संस्करण, अनुकूलन तह को संस्करण .9.0 .० को साथ आउँछ।
इच्छुक प्रयोगकर्ताहरूको लागि फोनलाई विभिन्न र colors्गमा किन्नु सम्भव छ। यो खैरो, हरियो, कालो र निलोमा उपलब्ध हुनेछ। ट्वायलाइट संस्करण केवल दायराको प्रो मोडेलको लागि आरक्षित छ।
दोस्रो स्थानमा हामी यो अन्य मोडेल फेला पार्दछौं। Huwei मेट 20 प्रो दोस्रो हुन्छ चिनियाँ ब्रान्डको उच्च अन्तमा तीन रियर क्यामेरा भएकोमा। ब्रान्ड फोटोग्राफीको क्षेत्रको मापदण्ड मध्ये एक बन्न गएको छ यसको उच्च-अन्त दायराको लागि धन्यवाद, जुन तिनीहरू यो मोडेलसँग कायम राख्न चाहन्छन्। यद्यपि यो केवल यसको क्यामेराको लागि बाहिर देखिँदैन, किनभने विशिष्टताको स्तरमा यसले निराश पार्दैन। यी Huawei मेट 20 प्रो को पूर्ण विशिष्टता छन्:
प्राविधिक विशिष्टता हुवावे मेट Pro० प्रो
मोडेल मेट 20 प्रो
स्क्रिन H..6.39-इन्च OLED QHD + रिजोलुसन र १ .19.5 ..9: ratio अनुपातको साथ
आन्तरिक भण्डारण १२128 जीबी (एनएमकार्ड कार्डका साथ एक्सपेंडेबल)
रियर क्यामेरा +० + २० + MP MP एपर्चरf/ १.40f/ २.२ रf/ २.20 LED फ्लैशको साथ
अगाडिको क्यामरा F / 24 को साथ 2.0 MP
कनेक्टिविटी GPS ब्लुटुथ .5.0.० यूएसबी टाइप-सी वाईफाई एसी र एलटीई क्याट २१
अन्य सुविधाहरू अन-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर IP68 प्रमाणीकरण हाइभिसन थ्रीडी अनुहार पहिचान
ब्याट्री W,२०० mAh W०W सुपर फास्ट चार्जिंग र १ W W वायरलेसको साथ
आयामहरू 157.8 x 72.3 x 8.6 मिमी
मूल्य 1049 यूरो
चिनियाँ ब्रान्डले हामीलाई एक उच्च-अन्तको साथ प्रस्तुत गर्दछ जुन निस्सन्देह विनिर्देशहरूको सर्तमा एन्ड्रोइडको शीर्षमा छ। यसको डिजाइन पनि, पछाडि गिलासको साथ। फर्मले उपकरणको लागी नयाँ प्रकारको गिलास ल्याएको छ, जो समात्न सजिलो छ र यसलाई समात्दा तपाईंको हातबाट चिप्लनबाट बचाउँछ। Disponible en varos रंगहरू: पन्ना हरियो, कालो, मध्यरात निलो, गुलाब सुन र ट्वाइलाइट र ,्ग, P20 प्रो को जस्तै ढाँचा। यो तत्व हो कि सबै भन्दा ध्यान आकर्षित गर्दछ।
हुवावे मेट २० प्रोमा ,,२०० एमएएच ब्याट्री छ, जुन यसका मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू बाहेक अघिल्लो जेनेरेसनमा अग्रिम हो। थप रूपमा, ब्रान्डले fast०W को सुपर फास्ट चार्जिंग पनि प्रस्तुत गर्दछ। यो अन्य ब्रान्डको चार्ज भन्दा %०% छिटो छ। त्यसो भए फोन 40० मिनेट भित्रमा %०% सम्म चार्ज गर्न सकिन्छ। रिभर्स वायरलेस चार्जिंग पनि शुरू गरिएको छ, जसले उपकरणका साथ अन्य फोनहरू वा उपकरणहरू चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले यो देखाइएको छ कि ब्याट्रीले हामीलाई ठूलो स्वायत्तता दिनेछ, ताकि हामी यससँग अन्य उपकरणहरू चार्ज गर्न सक्दछौं।
जडान र गति अन्य कुञ्जीहरू हुन्। कम्पनी नै अनुसार, सम्भव छ १० सेकेन्डमा HD चलचित्र डाउनलोड गर्न। साथै इन्टर्नेट जडानले फाइदा लिनेछ, हामी सबै समयमा उच्च गतिको साथ नेट सर्फ गर्न सक्षम हुनेछौं। अर्को पक्ष जुन फर्मको यो उच्च-अन्तमा सुधार हुन्छ।
क्यामेरा एक शक्ति हो र यो Huawei मेट 20 प्रो को सबै भन्दा ध्यान आकर्षित गर्दछ। एक ट्रिपल रियर क्यामेरा, फोनमा एक वर्ग आकार मा व्यवस्थित, यसको एलईडी फ्ल्यासको छेउमा। यो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हुन्छ, जसले हामीलाई सबै प्रकारका परिस्थितिहरूमा राम्रो तस्बिर लिन मद्दत गर्दछ। ब्रान्डले विज्ञापन गर्दछ कि सबै प्रकारको परिस्थितिमा छविहरू लिन सम्भव छ। हामीसँग पोर्ट्रेट मोड वा बोकेह प्रभाव जस्ता कार्यहरू पनि हुनेछन्, अन्य धेरैमा। क्यामेराहरू यस उच्च-अन्तको कुञ्जीहरू हुन्। तिनीहरूले केहि पनि निराश छैन।
यो IP68 प्रमाणिकरणको साथ आउँदछ, जसले यस Huawei Mate 20 Pro लाई पानीमा २ मिटर गहिरो minutes० मिनेट प्रतिरोध गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसो भए यो स्प्लेस र धुलोसँग पनि प्रतिरोधी छ, जसले पक्कै पनि कुनै दुर्घटना भएको खण्डमा प्रयोगकर्ताहरूलाई मानसिक शान्ति दिनेछ। उपकरणलाई केहि पनि हुने छैन।
उपकरण विभिन्न अतिरिक्त प्रकार्यहरू आउँदछ, धन्यवाद जुन यसलाई सबै भन्दा शक्तिशाली मोडेलको रूपमा अभिषेक गरिएको छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर स्क्रीनमा एकीकृत भएको छ यो अवस्था मा। थप रूपमा यससँग थ्रीडी फेशियल रिकग्निशन सेन्सर पनि छ, जसले प्रयोगकर्तालाई फोनलाई सबै समयमा अनलक गर्न अनुमति दिनेछ। यो अनुहार आईडीबाट हामीले चिनेको समान प्रणाली हो। साथै, हामीसँग हाईभिसन जस्तै सुविधाहरू छन्, जुन गुगल लेन्सको एक प्रकार हो। यसले हामीलाई वस्तुहरू पहिचान गर्ने सम्भावना दिनेछ-
केही दिन अघि उनीहरूको प्रस्तुतीकरण, यी फोनको मूल्यहरु लीक भयो। त्यसोभए जाँच गर्न सक्षम हुनु रोचक छ कि यी चुहिनेहरू सही थिए कि छैनन्। यो स्पष्ट छ कि यी हुवावे मेट २० र मेट २० प्रो सस्तो फोनहरू छैनन्, र चिनियाँ ब्रान्डको क्याटलगमा सबैभन्दा महँगो एक हुनेछ।
जस्तो कि हामीले अगाडि उल्लेख गर्यौं, दुबै फोनहरू विभिन्न र colorsहरूमा उपलब्ध हुनेछन्। मेट २० को मामलामा तिनीहरू हुनेछन्: खैरो, निलो, कालो र हरियो। जबकि मेट २० प्रो उपलब्ध हुनेछ: पन्ना हरियो, मध्यरात निलो, गुलाब सुन, कालो र ट्वायलाइट, जुन ढाँचाको स्वर हो, यस वर्ष यति लोकप्रिय।
हुवावे मेट २० यस अक्टुबरमा बिक्रीमा जान्छ, त्यसैले यो छिट्टै मार्केटमा आइपर्नेछ। त्यहाँ राम र आन्तरिक भण्डारणको केवल एक सम्भावित संयोजन छ, जुन 20/१4 जीबी हो। यस उपकरणले स्पेनी बजारमा 799 at यूरोको मूल्यमा हिट गर्नेछ.
अर्कोतर्फ हामीसँग Huawei Mate 20 Pro छ। यो फर्मको दुई फोनहरू मध्ये सब भन्दा महँगो हुनेछ, स्पेनमा यसको मूल्य १,०1.049eयुरो भइरहेको छ। उल्लेखनीय उच्च मूल्य, जुन एक हप्ता पहिलेको चुहावटसँग मिल्छ, जसले यसो भने कि यो यूरोपमा पर्ने यो मूल्य हुनेछ। अन्य मोडेल जस्तै यो बजारमा यस अक्टुबरमा सुरूवात हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Huawei » Huawei Mate 20 र Mate 20 Pro: हुआवेईको नयाँ उच्च-अन्त
Huawei वाच GT Android Wear बिना नयाँ स्मार्टवाच हो